Wild Run i umdlalo slot intanethi yi NextGen. Le meko yandisa inani elandayo Slots phone imidlalo okwangoku azinzile lwabo. Lo mdlalo slot isekelwe onomxholo izilwanyana kwaye kufuneka isibheno zombini bathandi zasendle kunye yokungcakaza. Funda okungakumbi ngale slot ukusuka uhlolo ngezantsi.
An Online Slots ifowuni imidlalo ukufumana kwi Run Wild kuwe
Nale Slots foni imidlalo, unayo 5 namacwecwe kunye 243 iindlela ukuphumelela. Nawe ungaqala nokubheja ngokubeka phantsi 30p, ukuya phezulu £ 750 spin ngalinye. le mifanekiso, animation soundtrack zonke ezithatyathwe an African Safari isihloko.
Le wesiqalo umise ngongcwalazi, apho Sun sentlalo, ngal ezilwanyana kunye nobomi zezityalo singabonakala. Kanye njengezinye Slots phone imidlalo, kukho injongo Wild Run. Injongo yale slot kukuba abadlali ukufumana 'Afrika Amathafa-isimbo' Jackpot win.
Izilwanyana khela Coins In Le mfono Slots Game
Le ekwazi yalo kwiindawo zokubeka yefowuni imidlalo luqulathe ezinye icon ikhadi isuti eziquka nedayimani, umhlakulo, iisimboli club kanye nentliziyo. Kukwakho iqela ngokubanzi zeesimboli yezilwanyana ekwi reel ngokunjalo. Ukuba ilizwe ubuncinane abathathu abafanayo iisimboli senyathi kwaye nengwe, uya kuzuza kangangoko 50 iinkozo.
ukutshatisa ezintathu, icons amane anesihlanu elephant iya kukwenza 2, 10 kwaye 100 iinkozo ngokulandelelana. Uphawu imikhombe kukunikeza 80 iinkozo. Le icon Ingonyama limele uphawu Wild. Olu phawu luza kuthatha ezinye zonke ii icon kwi reel. Ukuba uyakwazi ukusebenza asingqinelani ezintathu, amane anesihlanu le miqondiso ukuhlanganiswa lokuwina, uya kufumana 8, 80 kwaye 800 iinkozo ngokulandelelana.
I "On A Uphawu Roll" yi kwakhona spin ngeenxa ekuwongwa yona kanye eliqaqambe win. Kule game Slots foni, ufumana kwakhona spin, kunye nengonyama icons zasendle ziza kufakwa kwi reel 1 njengo 5. Xa bafumane indibanisela awinileyo sasendle ukuba yinxalenye yalo, uya kufumana intlawulo 2x kunye nenye spin kwakhona. Eli xesha emhlabeni ziya kufakwa kwi reel 1, 2, 4 njengo 5.
Ukubhatalwa yakho liphindaphindwe 3x ukuba uphumelele combo kunye endle ngomhla wesibini re spin-. Owesibini re-basonta kwakhona isebenze Free Imidlalo Mbonise ukuba enze combo lokuwina. Lo msebenzi bonus yi Free osebenzisa ngeenxa, apho endle zifakiwe kwi reel ezintlanu. Ukuba ilizwe a combo awinileyo kunye endle ukuba yinxalenye yalo, ke ufumana eyintlawulo 5x.
Lo mdlalo Slots foni kuyinto slot emnandi zikwenza. Le imizobo neya- siphendula, animation soundtrack uya kukugcina udlala ixesha elide. Kwakhona unalo ithuba lokuphumelela imali eninzi kunye iimpawu bonus afumanekayo.